Vaovao an-gazety - Naina ANDRIANTSITOHAINA
Naina ANDRIANTSITOHAINAVaovao an-gazety
Drafitry ny antoko iraisana: natoky ny mpanohana an'i Naina Anndriantsitohaina
Tao amin’ny Einsten Schule Ivato ny asabotsy teo no nitrangan ny adihevitra voalohany teo amin’ireo mpomba ny kandida tamin’ny fifidianana eto an-toerana teto Antananarivo.
Vakio ilay lahatsoratra
Tompondakan'i Alefa Naina: nahazo ny jackpot i Cosfa
Ny fifaninanana rugby “Alefa Naina Championat” dia fahombiazana malaza tamin’ny faran’ny herinandro teo. Tsy nandiso fanantenana ny olona izay nanao ny dia teny amin’ny kianja Malacam. Ny lalao fototra amin’ny andro eo amin’ny Tafika Fanatanjahantena Tafika (Cosfa) sy ny National Insurance Insurance (Cnaps) an’i Haute Matriatra dia nifarana tamin’ny isa 34 no ho 30 ny ...
Tamin'ny fihaonana tany amin'ny boriborintany faha-2: Naina Andriantsitohaina ao amin'ny faritany mandresy
Ny fitetezam-paritany amina faritra maromaro any amin’ny distrika faharoa renivohitra ny sabotsy lasa teo dia mikendry ny hahazo vato betsaka indrindra ny kandida IRK, Naina Andriantsitohaina. Tena tany amin’ny faritra Androndrakely tokoa no namaranan’ny kandida ny fitsidihany akaiky an’io andro io, indrindra ny orinasa Lanto Rakotomanga voafidy.
Arakaraka ny maha maro an’isa ny fampielezan-kevitra amin’ny kandidà Naina Andriantsitohaina dia mihetsika tanteraka, satria ny fahavononany hanova ny lalao, ny fahitany amin’ny famerenana indray ny fahamendrehan’i Antananarivo dia zaraina sy omena fanantenana indray, ary ny Tananarivians fantaro fa ny fifidianana iraisan’ny 27 Novambra dia tena renivohitra.
Miady hevitra momba ireo vondron'olona niresaka: nasehon'i Naina Andriantsitohaina ny ohatra
Ireo kandida dimy izay nirotsaka hofidina tamin’ny fifidianana monisipalin’ny renivohitra dia nandray anjara tamin’ny fihaonana voalohany nifanatrika tamin’ireo mpiasa ao amin’ny vondrom-piarahamonina Antananrivo Urban omaly tao amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely. Tsy toa ireo izay tsy nitsahatra nanakiana, fa i Naina Andriantsitohaina dia nametraka ohatra tamin’ny fijanonana ao anaty andalana adihevitra
Anisan'ireo laharam-pahamehan'ny Naina A .: famerenana ny tany nomena ny CUA
Nandeha tamin’ny boriboritany faha-5 omaly, dia nanantitrantitra ny kandida Naina Andriantsitohaina manoloana ny tsy fahaiza-mitantana amin’ny fitantanana ny kaomina ambanivohitra eto Antananarivo (CUA). Nampanantena ny Tananariviana izy fa aorian’ny fifidianana dia ho tonga ny tany rehetra an’ny Kaominina
Boriboritany enina eto an-drenivohitra: miaraka ao ambadiky ny kandida Naina Andriantsitohaina
Ny solontena avy any amin’ny distrika enina renivohitra dia nihaona tamin’ny kandidà ho an’ny fanambadian’i Antananarivo, Naina Andriantsitohaina, ny asabotsy teo Antanimena. Fotoana iray hitsena azy ny andrasan’ny solontenan’ny mponina ao an-tanànan’i Mille.
Kaomina eto Antananarivo: manohana an'i Naina Andriantsitohaina ny ekipan'ny MP Rossy
Ny solombavambahoaka Paul Bert Rahasimanana na i Rossy, voafidy amin’ny boriborintany faha-IV dia nanamafy ny fanohanany an’io kandida io amin’ny fanambadian’i Antananarivo, Naina Andriantsitohaina.
Communales: ny GNJ dia manamafy ny fanohanany ny kandidà n ° 4
Raha ny anarany, ny vondrona Naina Andriantsitohaina Nintsika Jiaby (GNJ) dia hanohana ny vatam-bolan’ny faha-4 amin’ny fifidianana iraisana. Izy io dia sehatra iray ahitana fikambanana enim-polo notarihan’ny mpandrindra nasionaly Johnfrince Bekasy
Naina Andriantsitohaina: famangiana nihoatra ny fokontany 100
Les Nouvelles 30/11/19
Ny kandida ben’ny tanànan’i Antannarivo, Naina Andriantsitohaina, dia nandalo tampoka nahatratra 100 ireo fokontany 100 nitsidika omaly tao amin’ny boriboritany faha-3. Anisan’izany Akorondrano Atsinanana, Ankadifotsy, Mandialaza, Andravoahangy ary Ankadifotsy Befelatanana
Fotoam-pivavahana ekoajika ao Andohalo: Nangataka fitahiana masina i Naina Andriantsitohaina
Lagazette Navoaka tamin'ny 13 septembre 2019
Ny kandida Naina Andriantsitohaina niaraka tamin’ny fianakaviany dia nisafidy ny hanorina fotoam-pivavahana ekumika tany Andohalo Garden omaly, mba hangataka ny fitahian’Andriamanitra, amin’ny alàlan’ireo mpitarika fiangonana